झापामा २ लाख २५ हजार राशिकाे ‘दिलमाया स्मृति कप फुटबल’ प्रतियोगिता हुने « News24 : Premium News Channel
झापामा २ लाख २५ हजार राशिकाे ‘दिलमाया स्मृति कप फुटबल’ प्रतियोगिता हुने
झापा । झापामा २ लाख २५ हजार राशिकाे दिलमाया स्मृति कप–२०७८ फुटबल प्रतियोगिता हुने भएको छ ।
झापा क्षेत्र नं. ४ का प्रतिनिधि सभा सदस्य एलपी साँवाको ममतामयी माता स्वर्गीय दिलमायाको स्मृतिमा झापा जिल्ला क्षेत्र नं. ४ वडास्तरीय फुटवल प्रतियोगिता आयोजना गरिएको गर्न लागिएको आयोजक नेपाल खेलकुद महासंघ केन्द्रिय कमिटिले जनाएको छ ।
बुद्धिमान साँवा लिम्बुको प्रायोजन तथा साँवा परिवारको संरक्षणमा सञ्चालन गरिन लागेको प्रतियोगितामा झापा क्षेत्र नं. ४ का २८ वटा वडाका टिमले प्रिसेलेक्शन म्याच खेल्ने आयोजकले सोमवार सुरुङगामा पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी गराएको छ ।
असोज १२ गतेबाट प्रिसेलेक्शन म्याच हुने र सो प्रतियोगिताबाट छनोट भएका ८ वटा टिमले उपाधिका लागि प्रतिष्पर्धा गर्ने फुटवल समितिका संयोजक सुनिल भेटवालले जानकारी दिए । उनका अनुसार क्वाटर फाइनलका खेलहरु कार्तिक ८ गतेबाट सञ्चालन गरिने जनाए ।
दिलमाया स्मृति कप–२०७८ को फाइनल खेल कार्तिक १६ गते दुधेको खेल मैदानमा हुने छ । उपाधि विजेताले २ लाख २५ हजार नगर तथा ट्रफी, मेडल पाउने छ । द्वितीय पुरस्कार १ लाख २५ हजार, क्वाटर फाइनलबाट बाहिरिने ४ टिमले १५/१५ हजार , सेमी फाइनलबाट बाहिरिने टिमले २५/२५ हजार नगद पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन् ।